मुमा र म | मझेरी डट कम
“उनीहरूका त बुबा, दाइ सबै छन् । सबै कमाउने छन् । त्यही भएर उनीहरूसँग पैसा छ अनि स्कुल पनि जान्छन् । तिमीहरूको त ...।” त्यसपछि मुमा सुकसुकाउँदै सारीको सप्कोले आँखा पुछ्न लाग्नुहुन्थ्यो । मुमा रोएको देख्दा माया लागेर आउँथ्यो । तर, त्यस्तो बेलामा के भनेर सान्त्वना दिनुपर्छ, मलाई थाहा थिएन । म मुमालाई गम्लङ्ग अँगालो हाल्थेँ, केही नबोली ।
कुनै–कुनै छिटको र चिप्लो लुगाको सुन्दर फ्रक मलाई ठिक्क हुनेजस्तो देख्दा म असाध्यै लोभिन्थेँ । र, हातले त्यो जामालाई बिस्तारै सुमसुम्याउँथेँ अनि कल्पना गर्थें, यो फ्रक मैले लगाउन पाए कति राम्री देखिन्थेँ होला...! अनि, मेरा छिमेकका साथीले त्यो सुन्दर फ्रकमा मलाई देखे भने कति आरिस गर्थे होला ? अनि, त्यस्ती राम्री भएकी मलाई देखेपछि त उनीहरू नहाँस्लान् नि ! उनीहरूले आफूहरूले स्कुलमा सिकेका खेल मलाई पनि सिकाउलान् । मलाई पनि उनीहरूले स्कुलमा गएर के–के सिकेका छन्, सबै भन्लान् ।
“भोलि–पर्सी धेरै पैसा भयो भने म तँलाई पनि यस्तै नै जामा किनिदिन्छु नि ...!” मुमा मेरो कपाल मुसार्दै जामातिर हेरेर भन्नुहुन्थ्यो अनि मचाहिँ फेरि त्यही जामामा आफूलाई देख्न लाग्थेँ ।
“उता परको मामाले ....।” मैले मुमाका आँखामा आफ्ना आँखा जुधाएर उत्तर दिएकी थिएँ ।
“अनि, मैले भनेकी थिइनँ त, कसैले पनि दिएको खानेकुरा र सामान नलिनू भनेर । चाहे त्यो पैसा नै किन नहोस्....। अनि, मैले भन्दाभन्दै पनि किन लिएको ? अनि, किन यसरी सुटुक्क लुकाएर राखेको ?” मुमाले ठूलो स्वरमा सोध्नुभएको थियो ।
“मामाले कसैलाई पनि नभन्नु अनि लुकाएर राख्नु भन्नुभएको थियो नि त ...!” मैले सहज निर्दोष भावमा उत्तर दिएकी थिएँ ।
“सबै खाइसकेँ नि ...! बहिनीलाई पनि खान दिएकी थिएँ । उसले पनि खाई त ! हजुरले बहिनीलाई चाहिँ केही पनि गर्नुहुन्न त, खालि मलाई गाली गर्नुहुन्छ । मलाई मामाले के खान मन पर्छ भनेर सोध्नुभएको थियो । मैले समोसा र पिपरमेन्ट...सुप्लांग पनि... ।”
“चुप...। चुप लाग्...। लौ हिँड् मसँग ।” मेरो बोलीलाई बीचैमा रोकेर मेरो हात समातेर त्यही मामाको डेरामा लिएर जानुभएको थियो मलाई ।
अन्त्यमा मेरी मुमाले जे भन्नुभयो, त्यो मलाई अँझै पनि सम्झना छ, “आज मेरो खसमले घर नछोडेको भए हामीलाई यसरी कसैले पनि हेप्ने थिएनन् । मलाई दिदी भन्ने, अँझ तिहारमा टीका पनि लाउन आउने, उता भने यस्ता नाबालिका छोरीमाथि.....।”
कसरी मर्थ्यो उ
संवादका मेला र सपना
समयको चक्र मोडे यो महल अझै स्वागत गर्न तयार छ
तिम्रो र मेरो लगन
भोलीको दिन त आफ्नै हो सानु
सागरको शिर हो हाम्रो सागरमाथा